FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA KOOLIE AOSTRALIANINA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Koolie aostralianina
Sary natolotry ny Toolalla Koolies
Fahita tamin'ny Koolies ny nanana iray na roa maso manga , fa satria ny nahitan'ny ADN mampifandray ny maso manga ao Koolie amin'ny gèle merle, izay miteraka zaza jamba / marenina, dia nanatsara ny fomba fiompiana azo antoka kokoa miaraka amin'ny famporisihana mafy ny fanambadiana matanjaka ho an'ny fahasalaman'ny karazany fa tsy ny endrika ivelany. Hitanay ny fihenan'ny Koolies maso manga. Ny lokon'ny maso ankehitriny dia maso volontsôkôlà ho an'ny mena sy maso volontsôkôlà na mainty ho an'ny mainty, ary ny lokon'ireto loko roa voalohany ireto, indraindray ianao dia mbola afaka mahazo maso manga, na ny ampahany aminy, toy ny chips, crescent na dia ny antsasany aza. tsy mahazatra intsony. Ny loko Koolie aostralianina dia mety ho mena na manga merle (modely) matevina (loko iray) mena / sôkôla na mainty bi (loko roa) mena sy fotsy, mainty sy fotsy, mainty sy mainty, mena trisolika mena sy mena (loko telo) ao anatin'izany ny merle, mazàna misy teboka tan ary teboka fotsy misy tratra. Ny halavan'ny palitao dia tonga amin'ny malama, fohy, fohy marokoroko, salantsalany, mifono indroa na tokana, misy volom-borona amin'ny tongony na tsy misy akanjo lava dia tsy fahita.
Ny Koolie dia karazan'asa miasa voalohany ary lehibe indrindra, mitombo amin'ny fiaretana, fiaretana ary azo tsoahina. Toy ny karazana asa rehetra, ny toetra voajanahary Koolies dia ny andiany izay mihetsika, ao anatin'izany ny ondry, omby, osy, soavaly, ombidia sy vorona. Ny Koolies dia fantatra fa miverina voajanahary (mitsambikina eo aorian'ny) ondry ary koa omby. Androany dia hitantsika ny adidy asa nentim-paharazana an'ny Koolie nitarina mba hampidirina ny serivisy, ny fanatanjahan-tena ary ny fiarahan'olombelona, ​​ny Koolies amin'ny ankapobeny dia tsy mahery setra amin'ny alika ary mandefitra karazana hafa rehefa ampidirina amin'ny fahazazana na karakarain'ny tompona za-draharaha, Koolies dia natokana ho an'ny tanora, fa misy foana ny maningana amin'ny lalàna, aza avela hisy ankizy tsy arahi-maso amin'ilay alika. Ny Australian Koolies dia niasa tamina tahiry tany Aostralia hatramin'ny fiandohan'ny taona 1800. Raha te-hanaraka ny fitakian'ny grazier sy stockman ny Koolie dia mila manana tanjaka mandritra ny 14 ora andro, fahaizana mifindra amin'ny karazan'asa iray mankany amin'ny iray hafa, na ny fitondrana omby amin'ny kilaometatra lavitra, amin'ny fanohanana ondry amin'ny hazakazaka. , na mameno lohany 10.000 amin'ny kamio, ny Koolie dia tsy maintsy nanao izany rehetra izany. Ny fahaizany mampifanaraka dia mamela azy ho milamina sy milamina manodidina ny vodinondry sy ny zanak'ondry nefa mbola fantatra hoe rahoviana no hampiasa hery, miaraka amin'ny hodi-kazo na manaikitra amin'ny fikosehana sy omby mifahy sy ny toetr'andro na ondrilahy. Ny Koolie dia mila mailaka sy mailaka, afaka mitsambikina, mandositra, mihazakazaka, mihazona, manakana ary mitondra fiara ary mahavita azy tsara, ary ny Koolie dia nahatanteraka ireo filàna ireo ary manohy manome izay ilain'ny mpikarakara azy ireo. Tsy ny zaza Koolie rehetra dia teraka miaraka amin'ny toetra voajanahary matanjaka an'ny mpiasa ary ireo alika kely ireo dia tonga lafatra amin'ny serivisy toy ny fanampiana olona, ​​SAR, Alert ary alika mpamantatra baomba ary koa fanatanjahan-tena toy ny fahaizanao, faharetana, fampiasana ary fanarahana maso, asa tsy misy tahiry Koolies dia mitazona ny tanjaka, ny fahaiza-manao ary ny hakingana, Koolies maro no tara mamelana, mampiseho ny toetrany voajanahary hatramin'ny faran'ny roa taona. Ity karazana ity dia tsy maintsy misy fanentanana ara-tsaina, tsy hahomby ao an-tokontany kely fotsiny izay tsy misy atao. Tsy ampirisihina hividy Koolie amin'ny olon-kafa ankoatry ny mpiompy voasoratra anarana manana ny traikefa, ny fahazoana ary ny tombontsoan'ny zana-kara ao am-pony, izay hanampy amin'ny fisafidianana koolie tsara indrindra ho an'ny tompona mety, hiantohana ny filan'ny fitsaboana rehetra. ny taratasy rehetra dia marina sy marina ary iza no hanolotra fanampiana sy torolàlana aorian'ny fivarotana ary raha ilaina dia avereno ny ra-n'izy ireo na ny fanampiana amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Ireto misy valiny antonony vitsivitsy amin'ny fividianana fikorontanana / jamba, nomen'ny Koolie Rescue izay manome sary mazava tsara momba ireo olana mety hitranga. Ramatoa iray no nihevitra fa nanao asa tsara izy rehefa nanosika azy nividy zazavavy Koolie kely tamin'ny tantsaha iray izay notsidihiny, nandehandeha ilay zaza, feno kankana ary toa mila sakafo tsara izany, naverina miasa ny reniny. ary vao dimy herinandro monja ilay alika kely dia tsapany fa ho faty ilay zaza raha avela. Izany no fomba fiompiana mpamboly hahazoana tombony sy tantsaha toy ny sarambabem-bahoaka, ny fifanarahana fiaraha-miory, miasa isaky ny mandeha. Tsy nivadika ho mpialokaloka ao an-toerana ilay tantsaha ary nijanona ny asany tsy misy indrafo, dia novidiny ilay zaza, ary natolony ny famonjena an'i Koolie enim-bolana taty aoriana, satria ny zazakely mahafatifaty no nandriatra ny fitafiany teny an-tsipika, nandavaka ny zaridaina rehetra namboly, nanidina ary lena foana izy, tany amin'izay toerana tiany sy nanodidina ny zanaky ny manodidina rehefa avy nanamboatra ny fefy. Ny mpamonjy voina dia nametraka azy niverina tany amin'ny toeram-pambolena iray izay nianarany niasa tahiry. Tovolahy iray no nahita ka nividy zazakely Koolie mahafatifaty sy manga ary fotsy indrindra avy any amin'ny fivarotana biby fiompy, (nahazo vaovao tsy nisy tamin'ny tompon'ny magazay), ho an'ny malalany tamin'ny Andron'ny mpifankatia dia tia izy tamin'ny fotoana nanolorany azy tamin'ny alika kely, voalohany dia tsy tsikaritr'izy ireo mihitsy fa tsy nitsambikimbikina tampoka ilay alika na nandritra ny oram-baratra, tsy nibolisatra izany rehefa nanomboka ny alika teo akaikiny, tsy nihodina ny lohany rehefa niditra ny efitrano izy ireo, manodidina ny roa ambin'ny folo herinandro Tsikaritr'izy mivady fa tsy tonga mihitsy izy rehefa niantso izy ireo fa tonga foana rehefa mahita azy ireo, ary nony farany teo am-panasana lovia indray alina dia nilatsaka ny sasany ary potipotika, notohizan'ny alika hatrany ny taolany niaraka tamin'ny lamosiny nankany an-dakozia, ary tsapan'izy ireo ny fehim-pifaliana manokana dia marenina. Tamin'ny alàlan'ny fifandraisana tamin'i Koolie Rescue dia afaka nanohana azy ireo izy ireo ary nahazo fanampiana tamin'ny fampiofanana ny Koolie marenina ary tsy nanenina mihitsy izy ireo nahita azy, dimy taona izao. Ireo tranga ireo dia mahazatra tsy ho an'ny Koolie ihany fa ny karazany rehetra, ny ankamaroan'ny Koolie Rescues dia manodidina ny enim-bolana ka hatramin'ny roa taona, nandalo ny dingana mahafatifaty ary ho any amin'ny fitarihana, fanampiana, omeo sehatra asa mitaky andraikitra lehibe aho fa ho lehibe kokoa valisoa noho izay azonao an-tsaina na ireo izay efa niaina ny fahombiazany ary efa antitra loatra ka tsy maharaka ny filan'ny mpikarakara sy ny sembana. Ny fifandraisan'ny tompon'andraikitra amin'ny alika kely dia ny dingana voalohany, ho an'ny endrika fanadihadiana azo antoka sy voaro indrindra. Miorena tsara foana amin'ny alikao, fa milamina, mpitarika fonosana tsy miova . Anarana canine amin'ny fifandraisan'olombelona tena ilaina.
Hahavony: 13 - 23 santimetatra (34 - 60 cm)
Milanja: 33 - 53 pounds (15 - 24 kg)
Ny fototarazo merle dia miteraka jamba sy na alika marenina famporisihana merle ho mafy orina mba hampijanonana ity tranga ity dia tena mamporisika. Ny koolies dia mety mijaly indraindray noho ny fanatanjahan-tena tafahoatra azy ireo, raha toa ka manao zavatra be dia be izy ireo / mitsambikina na mamono zavatra na aorian'ny Frisbees sy baolina dia mety hanimba ny taolam-paty sy ny tadiny, indrindra rehefa mihantitra izy ireo. Ny sasany mety ho mora tohina amin'ny alikaola kely amin'ny hoditra na amin'ny rafi-kery fanefitra ary amin'ireo zavatra simika toy ny famonoana poizina na famonoana poizina hafa ary amin'ny tranga tsy fahita firy dia mety hijaly ireo mpamono olona izay mety hitombo ny fahasarotany raha tsy voatsabo izy ary mety hiteraka fahafatesana amin'ny farany. maro ny karazany tsy natao ho an'ny Koolie ihany, vitsy ny isan'ny tranga voarakitra an-tsoratra ary kely ny fiompiana Koolie voalanjalanja ary tsy misy fiompiana mifantoka, mametraka ny lanjan'ilay fahaiza-manao iray ambonin'ny iray hafa, toy ny loko, ny karazany na ny toetra ny Koolie dia hijanona ho afaka amin'ny aretin'ny fototarazo any aoriana. Ny Koolies dia manana fahasamihafana fototarazo ADN madio indrindra amin'izao tontolo izao.
Ny Koolie aostralianina dia tsy natao ho an'ny fiainana mitoka-monina. Izy io dia mazoto miasa an-trano ary hanao tsara indrindra amin'ny tokontany malalaka farafaharatsiny ary mety indrindra ho an'ny olona miasa ao an-trano, na afaka mandray ny Koolie hiara-miasa amin'izy ireo, fianakaviana na mpivady miaraka amina olona any an-trano matetika.
Ity alika miasa mavitrika ity dia mila asa, izay misy fanatanjahan-tena tsy tapaka hijanonana amin'ny endrika ara-batana sy ara-tsaina. Na izany asa izany dia eo amin'ny tahiry miasa an-tanety, amin'ny fanampiana ny olona, ​​amin'ny fifaninanana amin'ny fanatanjahan-tena na amin'ny maha mpiara-miasa anao azy dia tokony ho fantany fa ilaina izany, ny mpikarakara dia tokony amin'ny alàlan'ny fanampiana, fitarihana, faharetana ary ny fitiavana amin'ny maha mpiara-miasa, mamporisika ary milamina. Ny maha-mpikarakara anao dia ho hita taratra amin'ny Koolie anao rehefa manaraka ny fitarihanao. Rehefa tsy mandeha, toy ny alika rehetra dia mila raisina isan'andro, lava MANDEHANA na jogging. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ity karazana ity dia tsy ho faly mandry manodidina ny trano tontolo andro. Alika ity izay tsy maintsy hanoratanao fandaharana amin'ny fampihetseham-batana tsara isan'andro, na manana asa hanaovana izany ianao.
Ny salan'isan'ny taona dia 18 + taona
Ny karazany rehetra dia nanomboka tamin'ny ankamaroan'ny Koolie aostralianina tsy misy hafa amin'izany. Ny boky tantara dia mampiseho fa ny fanafarana matotra ny karazan'asa miasa dia nanomboka tamin'ny taona 1800 ny boky maro momba ny Kelpie, Australian Cattle Dog ary Stumpy dia manondro ny fitaoman'ny karazany Merle amin'ny fototra iorenan'izy ireo manokana. Ny boky iray toy izany, nosoratan'ny mpanoratra Angela Sanderson nantsoina hoe 'Australian Dogs,' 1985 navoakan'ny Currawong Press dia manondro ny Koolie Aostraliana, izay nantsoina hoe Collie Alemanina. Ny tena mahavariana ao amin'ny bokiny dia ny firesahany manokana momba ny mpanoratra alemanina taloha iray Von Stephanitz sy ny bokiny 'The German Shepherd In Word and Picture' dia namoaka ny taona 1925, izay nanoratany hoe: 'Ny grazier aostraliana dia gaga tamin'ny alika mpiandry ondry alemanina. manafatra azy ireo. ” Ao amin'ny asa sorany dia miresaka momba ny alika misy tiger an'ny Tigra any Allemà afovoany sy avaratra izy, avy any Saxony sy Brunswick ary mamaritra azy ireo ho toy ny Quote: 'Ireo alika ireo dia manana volontany mainty na teboka mainty, na fantsona lehibe kokoa ao ambadika maivana kokoa, na, izay heverina ho toy ny aristocratic, volafotsy volondavenona miloko mainty ao ambadika mainty ”. Faran'ny teny nalaina «rehefa aseho miaraka amin'ny sarin'ny Tigra Alemanina dia tsy sarotra ny mahita hoe avy aiza i Koolie ankehitriny. Misy firesahana momba an'i Elizabeth Macarthurs ', (vadin'i John Macarthur izay nandefa ny indostrian'ny Merino any Aostralia,) fitaterana mpiandry ondry alemana iray antsoina hoe Joseph Pabts ho any amin'ny taniny any Camden, New South Wales tamin'ny 1825 mba hikarakarana ny ondriny 100 taona talohan'izay dia tonga niaraka tamin'ny fianakaviany i Joseph ary alika miasa alemà maromaro, heverina ho Tigers. Toa nanondro izany fa ny Tigers dia mety ho tany Aostralia 11 taona talohan'ilay fahatongavan'ireo Alemanina voalohany niditra an-tsokosoko tany S.A ary zato taonjato talohan'ilay famoahana ny boky Von Stephanitz. Andriamatoa Kirchner dia nanafatra Alemanina maromaro tonga tao amin'ny sambo Beulah izay niantsona teo amin'ny seranan-tsambo Circular tamin'ny 5 aprily 1849 mba ho mpiandry tanimboaloboka sy mpiandry. Ireo Tigers teo aloha dia tokony ho nitambatra tamin'ny rà mandriaka hafa tamin'izany vanim-potoana izany, avy eo rehefa nanomboka tonga ny mainty sy mainty Collies avy any Ekosy nohafain'i Thomas Hall sy ny Collies vita amin'ny volon'ireo Collies avy any Angletera nosoratan'i Chris Howe avy any Victoria sy ny fianakavian'i King of Ny NSW dia tokony hanana ny fitaoman'izy ireo amin'ny karazany, fa tsy toy ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy na Kelpie sy heeler ny Australian Koolie dia mbola mijanona ho tsy voakitika na voahodidin'ny fenitra ary mitoetra ho mitovy amin'ny nananany nandritra ny 160 taona. Misimisy kokoa momba ny Koolie
Miasa, Miompy, Fanatanjahantena
AHBA = Fikambanana Amerikanina Mpiompy
ANKC = Filankevitry ny Kennel nasionaly aostralianina
ASAP = Pathology momba ny biby manokana any Aostralia
ASCA = American Australian Shepherd Council America
KCA = Koolie Club any Aostralia
NZCCC = Filan-kevitry ny fanaraha-maso kininina New Zealand
TWBF = Fomba fiasan'ny nentim-paharazana any Finlande
VGAP = Fandaharana fiantohana ny génétika
Koolie aostralianina — Nolokoin'ny mpanakanto Barbara Keith
Koolie Tjukurpa aostralianina Vintana mitondra azy ireo mody — Sary nahazoana alàlana avy amin'ny Koolie Club of Australia
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Koolie
Sary Koolie 1
Koolie Sary 2
Koolie zava-misy ho an'ireo izay mila mahalala fotsiny
fifangaroana spaniel pug sy cocker
sarin'ireo dihy lehibe lehibe
fampahalalana momba ny alika canso corso